3 वर्ष 1 महिना पहिले #66 by Gh0stRider203
हामीले के गर्छौं भनेर छलफल गर्न एकअर्कालाई एकअर्काको बारेमा जान्न उत्तम तरीका FSXठीक छ?
मेरो लागि ....... ....... म अमेरिकन एअरवेज VA को सीईओ हुँ। म मेरो समयको सबैभन्दा बढी खर्च गर्दछु FSX ल्यान्ड-हाउको कार्गो गरिरहेको छ किनकि एयरलाइनले धेरै पैसा कमाउँछ। शीर्ष2पक्षी म उड्ने 747-800F र 747LCF हो। हामीले विभिन्न आकारहरूको एक ठूलो बेडामा छौँ।
तपाईंले प्राप्त धन्यवाद: 49
3 वर्ष4सप्ताह पहिले -3वर्ष4सप्ताह पहिले #69 by Dariussssss
म केहि चीजहरू सोध्न चाहन्छु। पहिलो वास्तवमा एउटा त्रुटि हो जुन मैले सिम ग्यान्ट्स ग्रान क्यानारिया दृश्यहरू स्थापना गर्न प्रयास गरेपछि देखाउँछ। त्रुटि दृश्यात्मक क्षेत्र हो (केहि नम्बरको साथ) फेला परेन। त्यो दृश्य फाइल मेरो सबै मा काम गर्दैन FSX sp2। हटाईयो तर त्रुटि अझै त्यहाँ छ।
अन्तिम सम्पादन:3वर्ष4हप्ता पहिले Dariussssss.
तपाईंले प्राप्त धन्यवाद: 28
3 वर्ष4सप्ताह पहिले #72 by rikoooo
Dariusssss: त्रुटि हटाउनको लागि तपाईंले मात्र आफ्नो दृश्य पुस्तकालय लाइब्रेरीबाट दृश्य हटाउनुपर्छ FSX कन्फिगर गर्नुहोस्। यदि स्थापनाकर्तासँग एउटा त्रुटि हो भने म दृष्यहरू हेर्न चाहन्छु। के यो केवल ग्रान्ड क्यानरी वा अन्य स्वेरीजसँग पनि भइरहेको छ?
3 वर्ष4सप्ताह पहिले #73 by Dariussssss
साथै, बीएन-2आइल्याण्डरका लागि FSX बिग्रिएको छ।
3 वर्ष3सप्ताह पहिले #95 by Dariussssss
3 वर्ष3सप्ताह पहिले #97 by Gh0stRider203
3 वर्ष3सप्ताह पहिले #99 by Dariussssss
3 वर्ष2सप्ताह पहिले #130 by Gh0stRider203
3 वर्ष 1 हप्ता पहिले #177 by FCAIR
3 वर्ष 1 हप्ता पहिले #183 by Gh0stRider203